Uluhluza njani uGqithiso loGqithiso kuGoogle Analytics
Uludwe lwe-SPAM oluDlulisayo: Ungayisusa njani i-Referral Spam kwiNgxelo kaGoogle yokuHlola
NgoLwesibini, nge-1 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesine, Aprili 1, 2021 Douglas Karr
Ngaba ukhe wakhangela iingxelo zakho zikaGoogle zohlalutyo kuphela ukufumana abanye abathumeli abangaqhelekanga bavela kwiingxelo? Uya kwindawo yabo kwaye akukho nto ikhankanyiweyo kuwe kodwa kukho itoni yezinye izibonelelo apho. Qikelela ukuba? Abo bantu zange babhekise ukugcwala kwindawo yakho.
Ukuba awuzange uqaphele njani google Analytics iyasebenza, ngokusisiseko ipikseli yongezwa kuwo wonke umthwalo wephepha obamba itoni yedatha kwaye uyithumele kwiinjini zikaGoogle zohlalutyo. Uhlalutyo lukaGoogle emva koko luchaza idatha kwaye luyicwangcise ngokufanelekileyo kwiingxelo ozijongileyo. Akukho magic apho!
Kodwa ezinye iinkampani zogaxekile ziye zayila kwakhona indlela ye-pixel yeGoogle Analytics kwaye ngoku iyinyani kwaye yabetha umzekelo wakho kuGoogle. Bafumana ikhowudi ye-UA kwiskripthi osifakileyo kwiphepha emva koko, kwiseva yabo, babetha nje iiseva ze-GA ngaphezulu kwaye de babe baqala ukuvela kwiingxelo zakho zokuthumela.
Kubi ngokwenene kuba khange baqalise utyelelo kwindawo yakho! Ngamanye amagama, akukho ndlela yendawo yakho yokubathintela. Ndayijikeleza le ndawo kunye nomninimzi wethu owachaza ngesineke into abayenzayo bayiphindaphinda kwaye bayiphinda-phinda de ifike kwisithsaba sam. Ibizwa ngokuba yi ukuthunyelwa kwesiporho or Isiporho ekubhekiswa kuso kuba khange bachukumise indawo yakho nangaliphi na ixesha.
Kukho konke ukunyaniseka, andiqinisekanga ukuba kutheni uGoogle engakhange aqalise ukugcina isiseko sedatha sokudlulisa. Olunjani uphawu olukhulu oluya kuba liqonga labo. Kuba akukho tyelelo lwenzekileyo, aba bathumela umyalezo ngoyaba benza umonakalo kwiingxelo zakho. Ngomnye wabathengi bethu ugaxekile othumelayo wenza ngaphezulu kwe-13% yabo bonke utyelelo lwabo lwendawo!
Yenza icandelo kwiGoogle Analytics eBlocks Referrer Spammers
Sayina ungene kwiakhawunti yakho kaGoogle.
Vula imbonakalo equka iingxelo ofuna ukuzisebenzisa.
Cofa indawo yokubika, emva koko uvule ingxelo oyifunayo.
Ngaphezulu kwengxelo yakho, cofa + Yongeza iCandelo
Chaza icandelo Zonke izithuthi (Akukho Spemu)
Kwiimeko zakho, qiniseka ukuba uxele nga ndakanyi ngomthombo ifana ne-regex.
Kukho uluhlu oluhlaziyiweyo lokuthumela ispammers kwi-Github esetyenziswa ngabasebenzisi bePiwik kwaye intle kakhulu. Nditsala olo luhlu ngokuzenzekelayo ngezantsi kwaye ndilufomathise ngokufanelekileyo ngengxelo ye-OR emva kwesizinda ngasinye (unokukopa kwaye uncamathisele kwindawo yokubhaliweyo engezantsi kuGoogle Analytics):
Gcina icandelo kwaye liyafumaneka kuyo yonke ipropathi kwiakhawunti yakho.
Uza kubona iitoni zeempendulo zeseva kunye neeplagi phaya phandle ukuzama ukuthintela ukuthunyelwa kogaxekile kwindawo yakho. Sukuzikhathaza ngokuzisebenzisa… khumbula ukuba olu ibingelohambo lokwenyani kwindawo yakho. Izikripthi aba bantu abazisebenzisileyo bayifakile i-pixel ye-GA ngokuthe ngqo kwiseva yabo kwaye zange baze nakuwe!
tags: Uhlalutyoibhloko yokuthumela spami-google analyticsugqithiselo logaxekileuludwe logaxekile
I-Freshcaller: Inkqubo yeFowuni eyiNtloko yeeQela zokuThengisa ezikude
Yazisa: UkuBekwa kwi-Intanethi, ukuBhukisha, kunye neQonga lokuHlawula
Jul 3, 2014 ngo-8: 33 AM
Enkosi ngala macebiso. Ibindicaphukisa ukuba nayo kwizibalo zam.
Dec 1, 2015 ngo-5:27 PM
Uyabheja. Sihlaziye isisombululo esichanekileyo kule nto kuba abantu abathumela i-spammers bangezi nakwisayithi yakho.
Uncedo loReferrer Spam (@RefSpamHelp)
Meyi 6, 2015 kwi-1: 03 PM
Siye saphinda sacaphuka ngokuthumela i-spam. Sizame “izisombululo” ezifumaneka kwiwebhu- btw htaccess-manipulaton ayithinteli kubathumeli bomoya-, sichithe ixesha elithile ngokwenza izihluzi kwi-GA kwaye ekugqibeleni sakha isisombululo sethu esizenzekelayo: http://www.referrer-spam.help ...
Siyathemba ukuba uyakuyithanda.
Dec 1, 2015 ngo-5:28 PM
Kwaye kubonakala ngathi abadluliseli bomoya baye baba ngumdlali obalaseleyo. Siye sahlaziya iingcebiso kwindawo. Enkosi ngalo lonke uncedo olunikezayo!
Meyi 21, 2015 kwi-5: 23 PM
Enkosi ngalo lonke uncedo lwakho ngale nto!
Dec 1, 2015 ngo-5:29 PM
Uyabheja. Sihlaziye ingcebiso ngokusekwe kwiindlela ezintsha zokudluliselwa kwesiporho ezisetyenziswayo.
Juni 11, 2015 ngo-3: 16 PM
Uncedo olukhulu apha, enkosi! Ngoku ukulinda ngomonde utshintsho lwereyithi yebounce 😀
Dec 1, 2015 ngo-5:50 PM
Ndihlaziye iingcebiso zokubonelela ngecandelo leGoogle Analytics. Ngaloo ndlela unokuyibona impembelelo ngoko nangoko.
Aug 5, 2015 ngo-4:21 PM
Yimiba yespam eyonyanyekayo phezulu / ezantsi komsinga: I-spammers ziyithumela kwi-spammer kwaye emva koko banikele ngonyango - luqikelelo lwam olo.
Ngaba ukhe wajonga iibhloko ze-IP okanye nantoni na ukubona ukuba kukho uluhlu lokuzifumana?
Eminye imibono ndizama ukubona ukuba abanye bazamile:
1) Ndingathi setha kwakhona ikhukhi ukuba ibenexesha elide leseshoni yokubala njengondwendwelo kodwa i-bots iya kuhlala i-pinging indawo. Ezi zinto kufuneka ziphathwe njengohlaselo lwe-DDoS ngenxa yendlela ezikhupha ngayo izixhobo eziphathekayo
2) Yenza iprofayile entsha kwaye ubeke ikhowudi entsha kuMphathi weTag kaGoogle ukuze ikhowudi ingabi lula ukuyijonga. Kwakhona, ukwenza i-akhawunti entsha kunye nokwenza njenge 4 iinkangeleko ukuze inani lokugqibela alipheli ngo -1 yenye ingqalelo. Kodwa, ndiyaqikelela ngeli xesha i-spammers zizenza ngokuzenzekela amanani e-UA okanye ukungahoyi amanani e-UA onke kunye nokusebenzisa isixhobo somakhi we-url.
Agasti 13, 2015 kwi-6: 06 AM
Molo, isikhokelo esihle, ndakhe isixhobo sasimahla esifikelela kuhlalutyo kunye nokwakha ifayile ye-htaccess yendawo yakho, yasimahla. http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ yiyeke
Aug 14, 2015 ngo-10:20 PM
Colin, esi sisixhobo esimangalisayo! Ndizakuyongeza kwisithuba!
Dec 8, 2015 ngo-4:50 PM
Izinto ezintle, Douglas.
Dec 8, 2015 ngo-5:50 PM
Enkosi Don! Ndiyathemba ukuba konke kulungile.
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2015 ngo-10: 27 AM
Iluncedo ngokwenene…. olu hlobo lwetrafikhi ye-spam sesona sizathu sokungcoliswa kweengxelo kuhlalutyo, olungenakunceda ukubonisa abathengi indlela isayithi eqhuba ngayo.
NgoJanuwari 1, 2016 ngo-12:55 PM
enkosi iwebhusayithi yam igcwele spam kwaye i-adsense indivalile
NgoJanuwari 3, 2016 ngo-6:10 PM
I-Spam iba ngumba omkhulu kule mihla. Nangona kunjalo, esi sithuba asikho malunga nesiza sakho okanye abantu bathumela i-spam kwisayithi yakho. Benza uhlalutyo lukaGoogle. Akufanele ichaphazele i-Adsense yakho konke konke, kodwa iya kuphazamisa i-Google Analytics yakho.
Jan 19, 2016 kwi-8: 30 AM
Ndidikiwe nyani yile spam. Ndiyathemba ukuba iya kundinceda.
Jan 19, 2016 kwi-11: 32 AM
Nam ngokunjalo. Andikholelwa ukuba uGoogle khange aze nesisombululo sale nto.
Jan 19, 2016 kwi-10: 33 AM
Isiqwenga esihle, besinengxaki ngale nto kwixesha elidlulileyo kwaye uninzi lwabantu lubonakala bengenalo nofifi lokuba iyaqhubeka!
Jan 19, 2016 kwi-11: 31 AM
Enkosi kwaye ndiyavuma… Ngenene bendingazi ukuba kuqhubeka ntoni ixesha elide, nam!
Jan 24, 2016 kwi-9: 14 AM
Enkosi ngenqaku lakho Douglas. Ufundeka kakuhle. Ndiyithiyile ngokupheleleyo i-spam, ibangele iingxaki ezininzi kwiiwebhusayithi zam kwixesha elidlulileyo, ngamanye amaxesha kubangele ukuba iisayithi zam ze-wordpress ziphazamiseke xa ndinenguqulo endala ye-wordpress.
Ngokuqinisekileyo uza kubelana ngeli nqaku kwindawo yam.
Ngoku ndiqala iblogi ye-wordpress yabathengisi.
Meyi 1, 2016 kwi-11: 28 AM
Molo Douglas .. ndinombuzo omnye. Ndifumana utyelelo olumbalwa kwi-com.google.android.googlequicksearchbox / .com
Ngaba oko kubandakanya i-spam? enkosi ngempendulo yakho
Meyi 3, 2016 kwi-10: 26 AM
Molo uFauzy, ndiyakholelwa ukuba sisibhengezo esisemthethweni esivela kwi Google Android app mobile.
Agasti 11, 2016 kwi-10: 46 AM
Kutheni ukuthunyelwa kwesiporho kwenzeka, ngaba aba bagaxekile baphuma ntoni kuyo?
Agasti 11, 2016 kwi-10: 49 AM
Kuyakhathaza ngokwenene. Inzuzo kuphela kukuba abasebenzisi abahlaziyiweyo abancinci baya kufuna umntu obhekiswayo kwaye banokuthenga iimveliso okanye iinkonzo zabo. Yindlela ephantsi kakhulu kwaye ehlekisayo yokuzama ukuqhatha abanini sayithi abangenalwazi kangako.